Ku Dhawaad Lixdan Xisbi Siyaasadeed oo Bayaan Kasoo Saarey Hannaanka Doorasho ee Dalka Ka Dhici Karta 2020-2021. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Wararka Ku Dhawaad Lixdan Xisbi Siyaasadeed oo Bayaan Kasoo Saarey Hannaanka Doorasho ee...
Ku Dhawaad Lixdan Xisbi Siyaasadeed oo Bayaan Kasoo Saarey Hannaanka Doorasho ee Dalka Ka Dhici Karta 2020-2021.
XISBIYADA SIYAASADDA EE SOOMAALIYA
BAYAANKA AXSAABTA SIYAASADDA EE KU
AADDAN NIDAAMKA DOORASHOOYINKA DALKA
MOGADSHU, Dayax H0TEL
Soomaaliya waxay maraysaa marxalad adag oo u baahan go’aan qaadasho geesinimo leh, si loo soo celiyo dhismo qaran adag oo saldhigiisu yahay caddaalad, dimuqraadiyad iyo sarraynta sharciga.
Axzaabta siyaasadeed ee dalka waxay u taagaan yihiin xaqiijnta iyo kamiro-dhalinta nidaam dimuqraadi ah oo ka hirgala Jamhuuriyadda Federalka ah ee Soomaaliya, sida ku cad Qodobka Kowaad ee dastuurka Qaranka oo sidan u qoran;
“Soomaaliya waa Jamhuuriyad Federaal ah, lehna gobanimo, dimuqraadi ah, oo ku dhisan matalaadda dadweynaha loo dhan yahay oo ku salaysan nidaamka Axzaabta badan iyo caddaalad bulshadeed”
Si loo helo horu’mar, caddaalad iyo sinnaan buuxda,waxa shacbiga Soomaaliyeed ee daalay uu u baahan yahay nabad, xasillooni siyaasadeed, horu’mar iyo in laga saaro mugdiga iyo jahawareerkan gaamuray oo loo raro iftiin iyo dimuqraadiyad uu caalamka kaga midnoqdo.
Laga bilaabo 1977, Soomaaliya waxay soo martay marxalado adag oo kala duwan oo siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba dib u dhacweyni ku ridday dhismihii qarannimo.
Hase yeeshee uguma horrayso dal burburay, wayna soo kaban kartaa si dhakhso ah, haddii lagu wajaho dadaal, daacadnimo iyo go’aanno adag oo doorasho xaq iyo xalaal ah oo dalka hore u mar u horseedda la suuro galiyo.
Sida lawada ogsoon yahay doorashadii 2016kii waxa laga muujiyay walaac weyn nidaamka Afar Dhibic Shan (4.5), haseyeeshee tanaasulaad iyo wada hadal dheer kaddib, waxaa lagu heshiiyay in markaas kali ah laga dhigo doorashada mid dadban oo ku salaysan nidaamka Afar Dhibic Shan oo aan markale dib loogu noqonayn.
Bishii Juun, 2018kii, magaalada Baydhabo waxaa madaxda Dawlad Goboleedyada iyo Dawlada Federaalka ah ku saxeexdeen heshiis ah nooca doorasho ee dalka laga qaban doono 2020/21, kaasoo ah doorashada loo yaqaan nidaamka Isu dheelitiran, Liiska Xiran ( Propotional Representation Closed list).
Guddiga Doorashooyinka ee Madax Bannaan (GDMB) go’aankaas ayaa lagu hawl galiyay, wayna dhammaystireen dhammaan tallaabooyinkii iyo qorshahii ay dhigteen ee loo baahnaa si doorasho u dhacdo.
Sharicigii Axsaabta waa la ansixiyay, kii doorashooyinka oo ku salaysan nidaamkii lagu heshiiyay, muddo 3 sannadood ah waa laga doodayay, cidkasta waa laga talo galiyay, Golaha Wasiirradu way ansixiyeen, Baarlamaankuna akhrintii koowad ayay mariyeen. Waxa haddaba nasiib darro noqotay in laga garab abuuray mid kale oo an marxaladda dalka iyo dadku marayaan ku habboonayn.
Haddi la qaato nidaamkaas cusub ee lagu taliyay, waxaa hubaal ah in dib u dhac weyni ku imaan doono geeddi socodka iyo hannaanka dimuqraadiyadeed ee dalka.
Dareen iyo Digniin;
Haddaannu nahay xisbiyada halkaan ku saxiixan, waxaannu si wada jir ah uga soo hor jeednaa, kana digaynaa qodobada soo socda;
Nidaamka ay Guddiga farsamada ee Golaha Shacabka soo jeediyeen ee FPTP oo 4.5 salka looga dhigay ma waafaqsana Dastuurka Qaranka qodobkiisa 22. xarafka 2 ee qeexaya in Qof kastaa uu xag u leeyahay in la doorto amma wax uu doorto.
Sharcigaasi mid Soomaaliya xaaladeeda anfaci kara ma ahan, waa nooc dawladaha hore u maray ay doorashooyinka ku galaan. Waxaa intaas dheer in ay ku taliyeen in 4.5 dib loogu noqdo;
Talada Guddiga Farsamada ee Golaha Shacabka soo qoray in kuraasta la gayn doono deegaannada isla markaana deegaanka oo dhammi u codayn doono, waxaannu u aragnaa inay nabadgelyo xumo iyo jahawareer ay arrintaasi keeni doonto;
Nidaamkaas cusub ee la keenay wuxuu keenayaa in beelaha kuraastaas ku fadhiya ay waligood ku fadhin doonaan, muwaadiniinta kalena aanay xaqaas yeela Karin;
Nidaamkaasi ma siin doono Barakacayaasha xuquuqdoodii doorasho amma codaynta uu Dastuurku u dammaanad qaadayay;
Maadaama uu dalku kala maqan yahay nidaamkaasi wuxuu keeni karaa in xildhibaannada ay qaarna ku yimaaddaan doorasho, qaarna ku yimaaddaan xulasho, taasoo jahawareer keeni doonta;
Waxaa jiri doona Odayaal dhaqameed aan aqoon iyo cilmi midna lahayn oo tiro yar ah, oo mar walba iyagu goáan ka gaara masiirka dhallin yarada haweenka iyo xeerdajinta qaranka, una horseedi doona dalka marwalba hore u mar laáan.
Si loola fal galo heshiisyada hore u marineed ee gobolka iyo caalamka ee ay Soomaaliya dhinaca ka tahay, waxaa lagama maarmaan ah in siyaasaddeena iyo dawlladnimadeennu noqoto mid la jaan qaadda siyaasadaha aan gobolka iyo caalamka la wadaagno.
Waxa hubaal ah in Somalia ay door weyn oo siyaasad iyo dhaqaale ay ka qaadan karto agendayaasha Africa 2063 amma heshiiska dhawaan dhex maray lixda dawladood ee Bariga Afrika (EAC) haddii aan dimuqraadiyad iyo doorasho hor ah dalkeenna ka hirgalinno.
Sida lawada ogsoon yahay Somalia waxay ku taallaa goobta ugu stratiijiksan caalamka iyo Gobolkaba, uguna xeeb dheer Africa. Waxay sidaas daraadeed noqon kartaa albaabka Bariga Afrika ugu muhiimsan ee laga galo Qaaradda. Haddana waa dalka ugu liitaa hore u mar iyo dhaqaaleba, waxaana sal u ah nabadgalyo xumo ay sabab u tahay qabyaalladda iyo kala qoqobid dhul iyo dadba.
Waxaannu haddaba soo jeedinaynaa:
In la qaato nidaamkii lagu jideeyaya Heshiiskii Baydhabo ee ahaa Matalaadda isu dheelli tiran, kaasoo ah kan ugu habboon marxaladda aan maraynno, markaad ka eegto xagga wadajirka mujtamaca, afkaarta, amniga iyo musuqmaasuq la’aanta.
In doorashada 2020/21 ay noqoto mid keeni karta kalsooni buuxda iyo isu dheelli tirnaan Gobollada oo dhan, taasoo ah Nidaamka loo yaqaanno (Propotional Representation Closed List) waxaana si dheelli tiran looga qaban karaa dhammaan Dawllad Goboleedyada iyo caasimadda Muqdisho.
Liiska xiran wuxuu dawo ka yahay in codbixiyeyaashu aanay codkooda ku bixin si qabyaaladaysan oo ay u codeeyaan Afkaar iyo Axsaab si dimuqraadi ah.
Waxaannu ku talinaynaa in doorashada lagu qabto goobihii Dawllad Goboleeyada ee lagu qabtay doorashadii 2016kii iyo gobollo kale oo lagu kordhiyo,Waxaa la dhigi karaa sanaaduuqda doorashada saddex ilaa afar degmo oo nabad ah oo dawllad Goboleeyada ah iyo caasimadda 17 keeda dagmo. Magaallo walbana waxaa laga samayn karaa ilaa 4 amma 5 goobood oo laga codeeyo.
Maadaama dalka iyo dadkuba ay qaybqaybsan yihiin waxa kali ah ee isu soo dhaweyn karaa waa xisbiyo iyo araa’ lagu heshiiyo, sidaas awgeed Somalia waa inay ka baxdaa xulasho iyo siyaasad qabyaalad ku dhisan;
5 waa nidaam caddaalad darro ku keenay qaybo badan oo bulshada Somaliyeed kamid ah, sida; Qabaa’illada ka maqan Baarlamaanka, Haweenka, dhallinyarada, Barakacoyaasha iyo dadyawga la xaqiray ee loogu yeedho dhibic shan (.5)
Si kastaba ha noqotee waxaa maanta aad loogu baahan yahay in sida ugu mudan, ugu fudud xagga nabad-gelyada, uguna kharashyar loo diyaariyo doorasho caddaalad ah oo aan keenin jahawareer iyo kalsooni xumo.
Marka doorashadu dhacdo waxaa dawlladda soo dhisaya Xisbiga ku guulaysta Waxaase lagama maarmaan ah in laga heshiiyo qodobka 89aad ee Dastuurka oo caddaynaya in Madaxweynaha labada Aqal ee Baarlamaanku soo doortaan.
Ugu dambayntii,xisbiyada siyaasada dalka waxay soo dhaweynayaan qodobada ay soo saareen qaramada midobey iyo daneeyeyaasha arimaha soomaaliya 18/Dec/2019 sidoo kale xisbiyada siyaasada dalka waxay raacsanyihiin una arkaan lagamamaarmaan 6da qodob ee ka soo baxay gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka Qaranka, kuwaasoo la xiriiray hanaanka doorasho ee dalka ka dhici kara waqtigan iyo tixgalinta baarlamaan ay ka codsadeen in uu tixgeliyo baaqooda iyo codsigooda.
Waa fursad uu Shacbigu kusii baran karo nidaamka doorashooyinka Axsaabta iyo dimuqraadiyadda, inta doorasho Hal Qof iyo Hal Cod oo dalkoo dhan ka dhacdaa ay suuro galayso.
Haddii aannu Xisbiyada nahay waxaa naga goán in aan marnaba laga tanaasulin in doorasho xor ah oo xalaal ah oo diimuqraadi ah dalka ka dhacdo.
Waa inaan marnaba nidaamkii 4.5 ee musuqmaasuq iyo qabiil ku salaysnaa aan fursad lasiinin ee dalka iyo mustaqbalka dhallinyarada oo 100/75 ah iyo haweenka oo 100/65 ah loo oggolaado xaqooda siyaasadeed sida ku qeexan Dastuurka Qaranka.
Ku: Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya
(Mudane Max’ed C/llaahi Farmaajo).
Ku: Raysul wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya
(Mudanae Xasan Cali Khayre).
Ku: Gudoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya
(Max’ed Mursal Sh.C/raxmaan).
Ku: Ergayga Qaramada Midoowe Ee Soomaaliya
Og: Midowga Yurub.
Og: African Union.
Og: Urur Goboleed IGAD.
Og: Jaamacada Carabta.
Og: Ururka Iskaashiga Islaamka.
Og: Safaarada TURKI Ee Soomaaliya.
Previous articleShirkadda Diyaaradaha Sameysa ee Boeing oo Maamulaheedi Shaqada Laga Eryey.
Next articleShuruudo Lagu Xirey Xulista Barlamaanka G/mudug oo Ahlu-Sunna Ka Horyimaadeen.